Waqtiga Akhriska: 3 daqiiqo The safarada tareenka ugu dheer adduunka oo dhan waa mid aad u dheer! sodcaalladoodii Kuwani waxay qaadan kartaa dhowr maalmood oo ay ku daboolaan kun oo miles. Sidaas, halkan sodcaalladoodii in ay qaataan ugu dheer ee Europe, Aasiya, Australia, iyo Maraykanka. Maqaalkan waxaa loo qoray in wax la baro…
Waqtiga Akhriska: 3 daqiiqo Waxaa jira magaalooyin badan oo qurux badan in Europe, iyo waxa ka badan, waxaa sidaas u fudud in ay iyaga oo dhan soo booqo. Ku safrid tareen waa hab fiican si aad u aragto kuwaas oo baaldi liiska dalal. halkan waxaa ku qoran 3 magaalooyinka Yurub ugu fiican booqday tareen. Maqaalkan waxaa loo qoray in wax la baro…
Waqtiga Akhriska: 5 daqiiqo Waxaa jira qaabab kala duwan ee gaadiidka la heli karo maanta ay u safreen Yurub, laakiin safarka tareenka oo ay kasoo horjeeddo safarka diyaaradda waa mid ka mid ah ugu xiisaha badan. Si kastaba ha ahaatee, taas oo ah hab gaadiidka ugu fiican? At Save A tareenka, dabcan waan eexnaa oo waxaan u maleyneynaa safarka tareenka inuu yahay…
Waqtiga Akhriska: 3 daqiiqo Bernina Express waa mid ka mid ah safarada tareenka ugu quruxda badan adduunka. First of dhan, Khadka Rauma ee laga bilaabo Dombas ilaa Andalsnes (Norway), aad ku raaxaysan karaan aragtida ah danbow sare. Intaas waxaa sii dheer, waxaad arki kartaa dhaadhaca buuraha iyo saxaraha markaad ka gudubto Rauma…